Ngiyasizonda Isikole | Intsha
ULIMI Hindi (Roman) ISpanishi Isi-Abkhaz Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iban Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Oromo Isi-Osset Isi-Ukraine Isi-Umbundu IsiBashkir IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKachin IsiKikongo IsiKinyarwanda IsiKirundi IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMalta IsiMoore IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTurkmen IsiTwi IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu ULimi Lwezandla LwaseBrazil ULimi Lwezandla LwaseChile ULimi Lwezandla LwaseMelika ULimi Lwezandla LwaseMexico ULimi Lwezandla LwaseRussia
Nakhu okudingeka ukwenze
Umbono omuhle ngokufunda. Zama ukuba nombono obanzi. Ezinye izifundo ozenzayo zingase zibonakale zingasizi ngalutho—okungenani okwamanje. Noma kunjalo, ukufunda ngezihloko ezihlukahlukene kuyothuthukisa indlela oqonda ngayo izinto ezikuzungezile emhlabeni. Kuyokusiza ube “yizinto zonke kubantu bazo zonke izinhlobo,” kukunike ikhono lokukhuluma nabantu abavela ezizindeni ezihlukahlukene. (1 Korinte 9:22) Uyothuthukisa nekhono lakho lokucabanga—ikhono eliyokusiza njengoba ukhula.
Ukuya esikoleni kufana nokuvula indlela ehlathini elicinene—kodwa ungakwazi ukukwenza kokubili uma unamathuluzi afanele
Umbono omuhle ngothisha wakho. Uma ucabanga ukuthi uthisha wakho ukubangela isithukuthezi, gxila kulokho akufundisayo hhayi kuyena. Khumbula, cishe uthisha wakho usefundise isifundo esifanayo izikhathi eziningi kwamanye amakilasi. Ngakho kungase kube yinselele kuye manje ukufundisa ngendlela enomfutho njengasekuqaleni.
Icebiso: Bhala amaphuzu, ngenhlonipho cela ukwaziswa okwengeziwe bese uba nomdlandla ngezifundo zakho. Umdlandla uyathelelana.
Umbono omuhle ngamakhono akho. Isikole siveza amakhono akho afihlekile. UPawulu wabhalela uThimothewu: ‘Sivuthele njengomlilo isipho sikaNkulunkulu esikuwe.’ (2 Thimothewu 1:6) Kusobala ukuthi uThimothewu wayenikwe isipho somoya ongcwele. Kodwa “isipho” sakhe sasidinga ukuhlakulelwa ukuze simzuzise. Kuyiqiniso ukuthi amakhono akho asesikoleni awuwanikwanga evela kuNkulunkulu ngokuqondile. Noma kunjalo, akekho omunye umuntu emhlabeni onamakhono afana nawakho. Isikole singakusiza uthole amakhono obungazi ukuthi unawo futhi uwathuthukise.
Indlela Yokuphumelela Esikoleni—Yiba Nomdlandla
Yiziphi ezinye izinto ezingakukhuthaza uthuthuke esikoleni?
Thumelela Thumelela Kuthiwani Uma Ngingasithandi Isikole?